HowTo: Ampidiro ny Plasma 5.2 ao amin'ny ArchLinux / Antergos + Tips | Avy amin'ny Linux
Ya asehontsika azy ireo ny vaovao sy ny fanatsarana izay entin'ny Plasma 5.2 ho antsika, ary amin'ity indray mitoraka ity dia hasehoko anao ny fomba fametrahana sy fikirakira ity kinova vaovao an'ny KDE ity amin'ny Antergos, amin'ny rafitra fototra ihany. Tsy mitombina izany raha toa ka mametraka ny ArchLinux amin'ny rangotra isika, satria Antergos dia mampiasa repositories mitovy.
Ity manaraka ity dia tokony hatao amin'ny raharahanao manokana. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezan'ny data na loza toy izany izahay.
1 Fametrahana Antergos
2 Mametraka Plasma 5.2
3 Torohevitra ho an'ireo mpampiasa KDE 4.14.X
Ny fizotry ny fametrahana Antergos dia tena tsotra, mitovy be amin'ny Ubuntu ary ny zava-drehetra dia vita amin'ny sary. Ny hany maha samy hafa azy dia ny amin'ny dingana hisafidianantsika ny Desktop Environment momba ny safidintsika, dia hisafidy ny safidy isika Base, izany hoe, tsy hametraka birao izahay.
Hanao an'izany isika satria raha misafidy ny KDE isika dia hametraka ny version KDE 4.14.4 ary tsy izany no hevitra.
Mametraka Plasma 5.2
Raha heverina fa efa nametraka Antergos isika ary efa vonona ny zava-drehetra dia hametraka ireo fonosana ilaina izahay hankafizantsika ny Plasma 5.2. Raha misy antony manana olana amin'ny Network Ethernet (memo amiko) ary mampiasa DHCP izy ireo, azon'izy ireo atao ny mampihetsika azy amin'ny baiko:
Tsy maintsy mihazakazaka fotsiny isika izao:
Mametraka izahay izao:
Azonao atao ny mangataka anay esory ny khelpcenter satria mifanohitra izy io. Hesorinay tsy misy olana
Ireto ny fonosana ilaina mba hampisehoana tsara ny zava-drehetra ao amin'ny KDE. Tsy afaka manadino antsipiriany vitsivitsy izahay:
Ny fonosana meta xorg mamela antsika hisafidy izay tiantsika hapetraka. Tsy manana karatra horonan-tsary mitovy daholo isika rehetra.
Tokony hampavitrika ny NetworkManager sy SDDM izay mpitantana ny session KDE isika izao.
$ sudo systemctl ahafahan'ny sddm.service $ sudo systemctl mamela NetworkManager
Afaka manomboka indray isika izao 😀
Torohevitra ho an'ireo mpampiasa KDE 4.14.X
Miaraka amin'ny fahatongavana miandalana ireo fonosana amin'ny fizarana manaraka an'ny KDE amin'ilay kinova ankehitriny, dia ampitaina amin'ny fomba hafa ireo rakitra fikirakirana raha nanazava tamin'ny lahatsoratra hafa aho. Na dia ho an'ny KDE4 aza dia tazonina ao anaty ny toeran'ny mpampiasa ~ / .kde4 /, ho an'ny rindranasa vaovao no hamonjeny ~ / .config / tahaka ny Arch Wiki.
Ao anaty izao ~ / .config misy rakitra tena ilaina antsoina kdeglobals izay nolazaiko noho ireto manaraka ireto: tonga tamiko fa tiako ny fampiharana Kate o Konsole Tsy nalain'izy ireo ny endritsoratra izay namboariko ho an'ny sisa amin'ny rafitra, noho izany dia voatery napetrako tamin'ny tanana. Ahoana? Tsotra.
Raha sendra anao io dia manokatra ny fisie izahay ary mitady ny fizarana Général izay tokony ho toa izao:
[General] ColorScheme = Breeze Name = Breeze shadeSortColumn = marina
ary avelantsika toy izao:
Ary mazava ho azy, tsy maintsy soloin'izy ireo an'i Tahoma sy Ubuntu Mono ireo endritsoratra ampiasain'izy ireo ho an'ny rafitra. Tsy ilaina ny mamerina ny PC na mivoaka ny fivoriana, manidy ny rindranasa fotsiny izahay amin'ny olana ary dia izay.
[... nasiam-panitsiana tsy tapaka ...]
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » HowTo: Mametraha Plasma 5.2 ao amin'ny toro-hevitra ArchLinux / Antergos +
- Azo atao ve ny mampiasa WiFi amin'ny fametrahana azy? Araka izany dia tsy ilaina ny mampifandray ny tariby ethernet.
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa Archbang aho ary te hizaha toetra ny Plasma 5, ahoana ny fitoniana? Misaotra 🙂
dtulf dia hoy izy:
Amin'ny maha faka faka # wifi-menio dia hanokatra ohatra hisafidianana ny tamba-jotra izy ary hametraka ny pass. Avy eo ianao dia afaka mitsapa ny fifandraisana amin'ny # ping -c 3 http://www.google.com.ar ary ho hitanao raha mifandray na tsia. Nataoko ity lahatsoratra ity -> https://blog.desdelinux.net/guia-de-instalacion-de-arch-linux-2014/
Mamaly an'i dtulf
Rehefa manatsara ny Plasma amin'ny Arch Kmix dia tsy manomboka amin'ny fanombohana izany, tsy maintsy manomboka azy amin'ny tanana aho ... Tokony hametraka azy indray ve aho? Satria ao amin'ny lozisialy System dia tsy misy fomba hanampiana ny Volume Control
BD550 dia hoy izy:
Misedra plasma 5 ao amin'ny OpenSUSE Tumbleweed aho, ary ny kmix dia manomboka tsy misy olana ao anaty lovia, izany dia raha kmix sy kmix5 ianao ary mety mampiasa kmix ianao.
Hatreto, mbola tsy nanome ahy hanantonana izany. Izy io dia mandany ondrilahy be dia be, ny plasmashell dia manomboka amin'ny 150 megabytes ary efa mandeha amin'ny 230 eo ho eo amin'ny telopolo minitra (izany rehetra izany, ankehitriny dia miafara amin'ny "akorandriaka" everything) ny zava-drehetra. Misy fluidity lehibe kokoa amin'ny sary mihetsika ary misokatra haingana kokoa ny fampiharana.
Ny zavatra "ratsy" dia ny tsy fahitako ny lohahevitra oksizenina ho an'ny haingon-trano eo am-baravarankely, tiako ilay rivotra teny ambony io.
Raha ny zavatra hitako, raha vantany vao navadika tamin'ny qt5 ny programa rehetra, dia ho mpandimby mendrika ny andiany faha-5 ny plasma 4.
Valiny amin'ny BD550
Salama, "bug" ity:
"Antony fangatahana: kmix-14.12.1-1 no ilaina fa tsy kmix-multimedia ho an'ny kmix miasa mety eo ambanin'ny Plasma 5."
Amin'ny manaraka, antenaina fa andro vitsivitsy monja dia hosoloina "Kmix" i kdemultimedia-kmix. Afaka mamaky fanehoan-kevitra misimisy ao amin'ny rohy ianao ...
Eny, rehefa tsy mivoaka izany dia atomboko amin'ny tanana ary io no 😀
Misaotra @hector, marina fa manana kmix fa tsy kmix5 aho satria toa Oxygen izany rehefa atomboko amin'ny tanana izany… Ary i @ BD550 dia somary tsy nisy RAM Plasma Manaraka, ny andro lasa teo dia nahatafiditra ny Occupy 4200MB aho!
Vahaolana tsotra hafa dia ny manampy "kmix-multimedia" amin'ny System Prefers -> Fanombohana sy fanidiana. Mihazakazaka amin'ny fanombohana.
Nataoko izay 😀
Salama, ho an'ireo izay manana olana amin'ny sddm, angamba izy io satria tsy apetraka.
Apetraka miaraka amin'ny pacman -S sddm sy voila.
Ny fangatahana iray napetrako ny zava-drehetra dia toa tsara fa raha ny fahitako azy dia kde 4.14 miaraka amin'i brezee ny olana dia tsy mampihatra ny fiovana amin'ny fisehoana izy io fa manova ny sary an-tsary ary mijanona ny zava-drehetra satria tonga hatrany am-boalohany izay miaraka amin'ny sary an-tsary sary masina rehefa hikatona fivoriana dia hijanona toy ny hoe sambany ianao niditra
Napetrako omaly tao amin'ny Arch ary ny rehetra dia mihoatra ny kely amin'ny toerany. Tsy dia mampivadi-po ahy manokana ny fanovana; raha ny marina dia nisy ny olako sasany tamin'ny KDE 4.14 izay namboarina. Mampalahelo fa misy ny kisary Plasma 5 sasany (ao amin'ny menio, ny widget misy fitaovana azo esorina, na ny cashew aza) toa goavambe ary tsy mety amin'ny toerako ny plasmoids. Tsy haiko ny manamboatra azy na mety hisy ny fifanolanana ,: S
Manana olana aho xD dia tsy olana lehibe fa saika haha, tsy maintsy atomboko amin'ny tanana ny "sddm" miaraka amin'ny safidy "start" satria ny "ahafahana" dia milaza fa "efa tsy misy ny tsy fahombiazana": Manana sosokevitra ve ianao hamahana izany? Ary misy "foto-kevitra" atolotray ve? Mihobia!
Harry Marcano dia hoy izy:
Salama shini-kire, mila miala fotsiny ilay napetrakao sy mampandeha ny sddm, ohatra, tsy mandeha ny gdm "$ sudo systemctl ajanony ny gdm.service" ary avelao ny sddm "$ sudo systemctl mampandeha sddm.service" ary dia izay, restart .
Mamaly an'i harry marcano
jedr93 dia hoy izy:
Salama, manana fanontaniana aho izao fa manana andohalambo miaraka amin'ny kinde 4 stable version, saingy efa nampahafantarina ahy izy io ary noho izany ny fametrahana plasma 5 .. ity aloha ny fanontaniako hoe mila esoriko aloha ary avy eo izay hapetraka sa ahoana ny fomba marina? ny zavatra tsy tadiaviko dia ny hamafana na inona na inona avy amin'ireo rakitrao manokana ... misaotra mialoha
Mamaly an'i jedr93
Salama jedr93, esory ilay napetrakao "$ sudo pacman -Rc kdebase-workspace" ary apetraho ny plasma "$ sudo pacman -S plasma-meta" azonao atao ny mitarika ny tenanao amin'ny wiki https://wiki.archlinux.org/index.php/Plasma
Tsara, fa efa milamina ve? Manana archlinux miaraka amin'ny kde 4.14.8 aho ary te-hametraka kde plasma 5.2 tsy misy ahiana.
Valiny tamin'i Maykel
Davicho dia hoy izy:
Salama! Manao ahoana ianao ?
Misaotra tamin'ny fanamboarana ireo mpitari-dalana ireo! 😀
Fantatrao fa nametraka fametrahana Arch tsy madio aho ary nametraka izay rehetra nolazainao saingy tsy milamina tsara ny tontolo iainana, taorian'ny fidirana an-tsokosoko sy ny fametahana ny bara KDE dia toy ny tsy dia tsara ny birao, tsy misy afa-tsy menio sisin'ny «sary - video - mozika »ary tsy afaka manao na inona na inona aho. Fantatrao ve izay mety ho?
Valiny tamin'i Davicho